Guddiga doorashada golaha shacabka oo maanta shaacinaya waqtiga la qabanayo doorashada guddoomiyaha golaha – Kalfadhi
Guddiga doorashada golaha shacabka oo maanta shaacinaya waqtiga la qabanayo doorashada guddoomiyaha golaha
Guddiga qaban qaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta la filaya iney shaaciyan waqtiga la qaban doonno doorashada loogu tartamayo xilka guddoomiyenimo ee golaha,sida ay tabisay Idaacada Dalsan.
Guddigan oo ka kooban 15 xubnood waxay shalay guddoomiye u doorten xildhibaan Nuur Iidow Bayle halka guddoomiye ku xigeenka guddiga loo doortay xildhibaan Sahro Cabduqaadir.
Xildhibaan Xasan Cali Maxamed (Amar Dambe) ayaa sido kale ku guuleystay in loo doorto xoghayaha guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka golaha shacabka.
Guddiga waxa uu sido kale shaacin doonnaa musharrixiinta u tartameysa xilka guddoomiyenimo iyo waqtiga ay qudbadahooda ka hor jeedin doonan golaha.
Musharrixiin badan oo ay ku jiraan xildhibaan Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan iyo Aaden Madoobe ayaa xilkan u tartamaya.
Xilkan waxaa iska casilay xildhibaan Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari) oo baarlamaanka Soomaaliya soo hogaaminayay muddo 5 sanno ah. iscasilaaddiisa ayaa timid kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay xildhibaanka iyo xubnaha ugu sarreeya golaha fullinta.
Xildhibaano sheegay inay ka feejigan yihiin faragalinta Xukuumadda ee Gudoomiyaha lasoo dooranayo.